जीवन बिमा किन गर्ने? बीमा गर्दा के फाइदा हुन्छ ? – Insurance Khabar
जीवन बिमा किन गर्ने? बीमा गर्दा के फाइदा हुन्छ ?
प्रकाशित मिति : ५ चैत्र २०७४, सोमबार ०५:५२
काठमाडौँ । ‘बीमा ऐन २०४९’ अनुसार ‘जीवन बीमा व्यवसाय भन्नाले कुनै व्यक्तिको जीवनसम्बन्धमा निजको आयुका आधारमा किस्ताबन्दी बुझाउने गरी कुनै खास रकम तिरेमा निजले वा निजको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको हकवालाले कुनै खास रकम पाउने गरी गरिने करारसम्बन्धी व्यवसाय सम्झिनुपर्छ ।’ नेपालमा जीवन बीमासम्बन्धी पूर्ण जानकारी र बिमाका फाइदाहरुको बारेमा ज्ञानको अभाबको कारण धरै नेपालीहरु बिमाको दयारा भन्दा बाहिर छन् र बिमा गरेकाहरुको पनि पूर्ण बिमा भएको छैन । जबसम्म हरेक नागरिकलाई जीवन बीमाको महत्वबारे जानकारी हुदैन, तबसम्म अधिकांश नागरिक जीवन बीमाबाट बञ्चित हुन्छन् ।
नेपालमा जीवन बीमाको इतिहास त्यति लामो छैन । विसं २०२९ मा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले जीवन बीमा व्यवसाय थालनी गरेसगै संस्थागत विकासको शुरुआत भएको हो ।
जीवन बिमा किन गर्नु पर्छ भन्ने कुरा आफ्नो-आफ्नो अवस्थामा भर पर्छ तर सामान्यतय बिमा गर्दा हुने फाइदा हरुलाई यसप्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ:-